jeff bezos(jeff bezos) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
दैनिक रु. ६८८ करोड कमाउने यी व्यक्तिको विजिनेश टिप्स तपाईलाई पनि काम लाग्नसक्छ !
काठमाण्डौ । यदि तपाईलाई विश्वकै धनी व्यक्तिले विजिनेश टिप्स दिन्छन् भने तपाईलाई त्यो निकै काम लाग्नसक्छ । इ–कमर्स क्षेत्रको विश्वकै ठूलो कम्पनी ‘अमेजन’का मालिक जेफ बेजोसले व्यापारसँग जोडिने केही महत्वपूर्ण कामहरुको विषयमा बताएका छन् । अमेजनका संस्थापक तथा सीइओ समेत रहेका बेजोसले कम्पनीको एक सम्मेलनको दौरान विजिनेशमा सफलता...
विश्वकै धनी जेफ बेजोसले निजी जिन्दगीको खोले राज, पिता असली होइनन् !
काठमाण्डौ । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति अमेजनका मुख्य कार्यकारी जेफ बेजोसले आफ्नो जिन्दगीका केही ऐतिहासिक पलहरुको विषयमा खुलासा गरेका छन् । एजेन्सीहरुले जेफलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन् कि उनका पिता अमेरिकाका स्थायीबासी होइनन् । उनका पिता १६ वर्षको उमेरमा क्यूबाबाट फ्लोरिडा पुगेका थिए । जेफका अनुसार सन् १९६२ मा उनका पिता माइक...
सफाईको काम गर्ने एउटा ठिटो कसरी बन्यो विश्वकै धनी व्यक्ति ? रोचक रहस्य
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इकमर्स कम्पनी अमेजन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बन्न सफल भएको छ । अमेजनले बिल गेट्सको कम्पनी माइक्रोसफ्टलाई पछार्दै यो सफलता हासिल गरेको हो । अमेजनको कुल बजार पूँजीकरण ७९७ अर्ब डलर भन्दा बढी भइसकेको एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । अमेजनको यो सफलताको यात्रा त्यति सहज भने थिएन । अमेजन कम्पनीका संस्थापक...
काठमाण्डौ । अमेजनका फाउण्डर जेफ बेजोसले अर्को एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । ब्लुमबर्गको बिलेनियर्स इण्डेक्सका अनुसार गत सोमबार जेफ बेजोसको कुल सम्पत्ति(नेटवर्थ) १५० अर्ब डलर माथि पुगेको छ । जेफको नेटवर्थ माइक्रोसफ्ट कर्पका बिल गेट्सको भन्दा करिब ५५ अर्ब डलर बढी रहेको छ । गेट्स अहिले विश्वका दोश्रो धनी व्यक्ति हुन्, पहिला...
१८ वर्षपछि पहिलोपटक कुनै व्यक्तिसँग यति धेरै सम्पत्ति !
काठमाण्डौ । विश्व चर्चित ईकमर्स कम्पनी अमेजनका संस्थापक तथा सीइओ जेफ बेजोसले १८ वर्ष पुरानो रेकर्ड तोडिदिएका छन् । ब्ल्याक फ्राइडेमा भएको महासेलबाट जेफ बेजोसको सम्पत्ति बढेर १०० अर्ब डलरको उचाई पार गरेको छ । यस्तो घटना १८ वर्षपछि भएको हो, जहाँ विश्वको कुनै अर्बपतिको सम्पत्ति १०० अर्ब(१ खर्ब) डलर माथि पुुगेको होस् । यसअघि सन् १९९९ मा बिल...
काठमाण्डौ । प्रत्येक मानिस चाहन्छ कि ऊ कुनै मल्टीनेशन कम्पनी वा कुनै अर्बपतिको उद्योग वा व्यवसायमा काम गर्न सकोस् । तर, यस्तो चाहना राखेर मात्र हुँदैन, केही खास क्षमता हुनेहरुको मात्र यस्तो चाहना पूरा हुनसक्छ । खासमा यस्ता ठूला कम्पनी र अर्बपतिहरुले आफ्ना कर्मचारीमा खास क्षमता खोज्छन् वा खास क्षमता भएकाहरुलाई मात्र कर्मचारीको रुपमा...
अन्तरिक्षको यात्रा गर्न जसले ११ हजार करोडको सेयर बेचे
काठमाण्डौ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो इकमर्स कम्पनी अमेजन डटकमका संस्थापक तथा विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्ति जेफ बेजोसले कम्पनीमा रहेको आफ्नो १.३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गरेका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार बेजोसले अमेजनको १० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेर ११० करोड डलर जुटाएका छन् । सेयर बिक्री गरेर जुटाइएको रकम उनले आफ्नो अन्तरिक्ष मिसन...
बिल गेट्सलाई उछिन्ने जेफ : किशोरीआमा र हारेका बुबाका अलपत्र सन्तान !
काठमाण्डौ । अमेजनका संस्थापक ५३ वर्षीय जेफ बेजोस शुक्रबार माइक्रोसफ्टका बिल गेट्सलाई पछार्दै विश्वकै सर्वाधिक धनी बन्न सफल भएका छन् । ब्लुमबर्गका अनुसार उनी ९० अर्ब बढी डलर सम्पत्तिको साथमा विश्वकै सर्वाधिक धनी बन्न सफल भएका हुन् । सेयरमा आएको उछालसँगै विश्वको सर्वाधिक धनी बन्न सफल बेजोसको संघषपूर्ण जिन्दगी निकै हृदयविदारक र...
जन्मदिनको अघिल्लो दिन बिल गेट्सलाई झट्का, बेजोस बने विश्वकै धनी !
काठमाण्डौ । जन्मदिन भन्दा ठीक एकदिनअघि विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बिल गेट्सलाई यस्तो झट्का लागेको छ, जसको सायद उनलाई जीवनभरि याद रहिरहनेछ । शुक्रबार अमेजन कम्पनीका फाउण्डर जेफ बेजोसले बिल गेट्सलाई पछाडि पार्दै विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न सफल भएका छन् । खासगरी अमेरिकी मार्केट खुल्नासाथ अमेजनको सेयरमा १० प्रतिशत भन्दा बढीको...
जसले २४ घण्टामै ६४ हजार करोड रुपैयाँ गुमाए........!
काठमाण्डौ । बिहीबार बिहानै यी व्यक्ति विश्वकै सर्वाधिक धनी बन्न सफल भए । केही घण्टाको फरकमा यिनको सम्पत्ति यति तीव्र गतिमा बढ्यो कि उनले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सलाई समेत उछिन्दै सर्वाधिक धनी बन्ने सफलता प्राप्त गरे । तर, उनको यो खुशी धेरै समय टिक्न सकेन, अनि २४ घण्टाभित्र उनले हेर्दा हेर्दै ६४ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति...
जेफले जोगाउन सकेनन् सर्वाधिक धनीको ताज, केही घण्टा मात्र टिके
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ई–कमर्स कम्पनी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसले विश्वकै सर्वाधिक धनीको ताज केही घण्टा मात्र जोगाउन सके । केही घण्टाका लागि बिल गेट्सलाई समेत पछि पार्दै विश्वकै धनी बनेका उनी फेरि दोश्रो नम्बरमा ओर्लिएका छन् । फोब्र्सका अनुसार बिहीबार अमेजन कम्पनीको सेयरमा आएको उछालका कारण बेजोस माइक्रोसफ्ट कम्पनीका...
विश्वका सर्वाधिक धनीको कथा : किशोरी आमाको पुत्रदेखि दुःखै दुःखको जिन्दगीसम्म !
काठमाण्डौ । अमेजनका संस्थापक ५३ वर्षीय जेफ बेजोस बिहीबार माइक्रोसफ्टका बिल गेट्सलाई पछार्दै विश्वकै सर्वाधिक धनी बन्न सफल भएका छन् । ब्लुमबर्गका अनुसार उनी ९०.९ अर्ब डलर सम्पत्तिको साथमा विश्वकै सर्वाधिक धनी बन्न सफल भएका हुन् । सेयरमा आएको उछालसँगै विश्वको सर्वाधिक धनी बन्न सफल बेजोसको जिन्दगी यसअघि अहिलेकोजस्तो शानदार र...
बिल गेट्सलाई उछिन्दै विश्वकै धनी बन्न सफल यी व्यक्ति को होलान् ?
काठमाण्डौ । विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति को हो ? तपाई भन्नुहोला–बिल गेट्स । यो उत्तर अब गलत हुनेछ । कारण, बिहीबारदेखि बिल गेट्सको नाममा रहेको विश्वकै धनी व्यक्तिको ताज अर्का अर्बपतिले खोसेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो इ–कमर्स कम्पनी रिटेलर अमेजनका फाउण्डर जेफ बिजोस विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न सफल भएका छन् । ब्लुमबर्गमा...